Họtelu ndi di na Ijebu Ode, Ogun - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Họtelu Ijebu Ode
Banyere Ijebu Ode City
Obodo Ijebu Ode bụ obodo isi ochichi govoomenti nke ime obodo nke di na n'ebe ndịda-ọdịda anyanwụ nke Nigeria. O bu nke di 110 km site n'okporo ụzọ ugwu-ọwụwa anyanwụ nke Lagos. Ọ bụ obodo nke abụọ kasị ukwuu na obodo Ogun Steeti ma o buru enwetacha Abeokuta, buru kwa ogige nke ahia nke mpaghara obodo nke oru ubi ebe a na akoputa ji, akpụ, ọka , ụtaba na owu. Enwere ọtụtụ obodo nta n'akụkụ Ijebu bu ndi a na akpọkarị "Egure".
Ememme na Obodo Ijebu Ode
Ememme Agemo na ewere onodu na Imodi Mosan na onwa asaa ọ bụla nke bụ maka ịdị n'otu nke Ijebus. Enwere Agemos iri na isii n’akụkụ dị iche iche nke Ijebu. Ememme nwere mmanwu nke na egosi ihe nkà nke okpukperechi nke ndi Yoruba. Iwu megidere umu nwanyi ihụ Agemo, a na ama ọkwa na igwe ngbasa okwu nke ikuku na kwa na igwe nke ihe onyonyo nye ọha na eze na-agwa onye ọ bụla kpọmkwem oge Agemo ga- apụta.
Ọzọkwa, ememme Oba Ojude bu nke a na -enwekarị na otutu ụbọchị mgbe emechara ememme Ileya. Ọ bụ ememme nke nzube ya bụ maka ikpokota ndị Ijebu ọnụ maka inye nsọpụrụ nye eze ha, ọ bụ otu n'ime ememme ndị kasị ukwuu na mba owuwa anyanwu nke Afika.
Hotelu Ndi di na Ijebu Ode
Chọta họtelu dara oké ọnụ na nke di ọnụ ala na obodo Ijebu Ode na ọnụ ego ahịa kasị mma na Travel.jumia.com!
Họtelu Ota Họtelu Abeokuta Họtelu Sagamu Họtelu Ifo Họtelu Sango Ota Họtelu Obafemi Owode
Họtelu Ipokia Họtelu Owode Yewa Họtelu Ilaro Họtelu Remo North Họtelu Ewekoro Họtelu Igbesa